Cabdi Rashiid Janan oo qirtay in Ciidamo looga qabtay dagaalkii Beled-Xaawo - Awdinle Online
Cabdi Rashiid Janan oo qirtay in Ciidamo looga qabtay dagaalkii Beled-Xaawo
Wasiirka Wasaaradda Amniga dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa markale ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada Beled-Xaawo ee goblka Gedo iyo qorshaha kaga degsan degmadaas.
Wasiir Janan oo la hadlay BBC-da ayaa waxaa uu sheegay in sababo jiray aawgeed ay uga baxeen degmada Beled-Xaawo kadib markii ay Ciidamada dowladda kala wareegeen degmadaasi Beled-Xaawo.
Cabdi Rashiid Janan oo wax laga weeydiiyay Ciidamadii ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ku qabatay dagaalkii Beled-Xaawo ayaa qirtay in dagaalka looga qabtay 16 askari halka uu sheegay in 36 kale ay iyaga isdhiibeen.
Dowladda Soomaaliya & Maamulka Jubbaland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalkii ka dhacay degmada Beled-Xaawo 25-kii Bishii la soo dhaafay ee Janaayo, iyada oo midba midka kale uu guulo ka sheegtay dagaalka.
Next articleSuuragal ma tahay in Maanta uu furmo Shirka Dhuusamareeb?